Dilal ka dhacay maanta degmooyinka wadajir iyo hodan oo loo geestay dad u shaqeenaayey dawlada – STAR FM SOMALIA
Laba nin oo u shaqaynaayay Dowladda Somaliya, ayaa waxaa maanta siyaabooyin kala duwan loogu dilay Magaalada Muqdisho, iyadoona ay baxsadeen kuwii dilalkooda ka dambeeyay.
Labadaan nin oo lagu kala magacaabi jiray C/risaaq C/qaadir Xaaji Masalle iyo C/laahi Muumin, ayaa lagu kala dilay Degmooyinka Hodan iyo Wadajir, iyadoona aad mooddo in weeraradu ku soo badanayaan Degmada Hodan.
Weerarka hore oo ka dhacay Degmada Wadajir, ayaa waxaa lagu dilay C/laahi Muumin, kaasoo dhawaan ka shaqo bilaabay Bankiga Dhexe Somaliya.
Weerarka labaad oo ka dhacay wadada Taleex ee Degmada Hodan, ayaa lagu dilay C/risaaq C/qaadir, markii gaari uu watay lagu horgeeyay gaari kale. Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in C/risaaq uu ka tirsanaa Hay’adda Nabad Suggida.
C/risaaq waxaa uu dhawaan ka soo laabtay dalka dibadiisa. Nabad Suggida kama hadlin tallaabada maanta lagu dilay ninkaasi, walow aanba Nabad Suggida looga baran inay ka hadasho dilalka loo gaysto xubnaha ka tirsan.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaaya weerarada ay ka gaysanayaan xubnaha ka tirsan Ururka Al Shabaab, kuwaa oo beegsi joogto ihi ku haaya Saraakiisha Dowladda Somaliya.
Weerarada ka dhacaaya Caasimadda, ayaa waxay ku soo aadayaan, iyadoo diyaargarow loogu jiro noocii ay noqon laheyd doorashada lagu wado in sanadka soo socdo ay ka qabsoomto dalka.